Ubomi obutofotofo kwiiHimalaya! ILoft eJogibara inayo yonke-indawo enesitayile kwaye ikhululekile, indawo enefashoni nefanelekileyo, kunye nemibono entle etshayelayo!
Ibekwe ngokugqibeleleyo ngasentla kwe-Illiterati Café ehlala ipholile, imizuzu embalwa ukusuka kwintengiso enkulu yaseMcLeod. Ukufikelela ngokulula kwindawo yokupaka, umgama okhubekayo ukusuka kwi-cappuccino yasekuseni, kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo... bonwabele ubutofo-tofo bekhaya kunye nobulula besixeko!
I-loft imiselwe ngokupheleleyo ukuba iphile kamnandi! Ikhitshi lixhotyiselwe ngokupheleleyo ukupheka ukutya kwakho. Kukho iincwadi kunye nemidlalo. Intsimbi, isomisi seenwele, iimathi zeyoga kunye neeambrela. Inkonzo yokuhlamba iyafumaneka.
Ngokwenene likhaya elikude nekhaya!
Indawo edumileyo yaseJogibara ibekwe nje neentloni zentengiso enkulu yaseMcLeod. I-Illiterati Café kunye necafé yeqabane layo kunye nendawo yokusebenzela, Enye indawo, ibonelela ngeendawo ezizodwa nezithandekayo zokuthatha ikofu, ukufunda incwadi, ukonwabela isidlo, kunye nokudibana nabalinganiswa abanomdla kunye nabanemibala ehlala rhoqo kule ndawo.
Ubumelwane bunesauna entle kunye ne-spa, isikolo se-bhutoh, isikolo somculo, i-ayurvedic kunye neekliniki zokuphilisa, iivenkile ezirentisa ngeebhayisekile nokunye okuninzi...
Ibekwe kufutshane ngokwaneleyo kwimakethi ephambili ukuze ivele ngokulula ukuze uyokuthenga kunye nokhetho oluninzi lokutyela!
Ndihlala ngaphandle kwedolophu kunye nenqwaba yabantwana bam. Ndihlala ndijikeleza ukuze ndithi molo ngexesha lasemini kwaye ndihlala ndifumaneka kwi-intanethi ukuphendula imibuzo, ukulungisa imiba kwaye ndinike iingcebiso!